Thwebula ComboFix 17.1.13.1 – Vessoft
ComboFix – a isofthiwe ukulahla amagciwane kanye spyware. Isofthiwe aqalaze ngokuzenzakalelayo ohlelweni bese kuthola amagciwane ezivame kakhulu, ngemva kwalokho kudala imibiko umbhalo imiphumela scan. Combofix ikuvumela ukususa yesikhashana futhi ezinonya amafayela, amafolda, lokubhalisa okufakiwe, njll Isofthiwe uyakwazi ukudala uhlelo ukubuyisela iphuzu futhi ebhukwini yokusekelayo. Combofix iqukethe ukucupha nezimo izilungiselelo scan.
Ukususa amagciwane ezivamile
Careful uhlelo scan
Ukuhlanza of the system out of doti
Kwakha uhlelo ukubuyisela iphuzu
Amazwana on ComboFix:
ComboFix Ahlobene software:
English, Español, Português, العربية... SUPERAntiSpyware 6.0.1232 Free Edition futhi Professional
English, Українська, Français, Español... Mozilla Firefox 50.1 futhi 51.0b9 rc 1